दाङका तीन युवाको भारतमा ‘रहस्यमय’ मृत्यु (नामसहित) – जलजला अनलाइन
दाङका तीन युवाको भारतमा ‘रहस्यमय’ मृत्यु (नामसहित)
Posted on April 12, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on दाङका तीन युवाको भारतमा ‘रहस्यमय’ मृत्यु (नामसहित)
चैत २९, दाङ । मजदुरीको सिलसिलामा भारत पुगेका तीन जना नेपालीको मृत्यु भएको छ।
यो खबर नारायण खड्काले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका-२ अमुवाका २३ वर्षीय नोखिराम भण्डारी, २१ वर्षीय प्रकाश वली र २४ वर्षीय पूर्णबहादुर वलीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए।
पाण्डेका अनुसार चैत ६ गते पूर्णबहादुर वली बेपत्ता भएपछि नोखिराम भण्डारी र प्रकाश वली उनको खोजी गर्न भन्दै गएका थिए। वलीको खोजीमा गएका भण्डारी र वली चैत १० गते भारतको कुल्लु मनालीको भीरमूनि मृत फेला परेका थिए।
भण्डारी र वलीको शव चैत १२ गते दाङ ल्याएर प्रहरीले आफन्तको जिम्मा लगाएको थियो। वेपत्ता पूर्णबहादुर वलीलाई खोजी गर्ने क्रममा चैत २५ गते भारतको कुल्लु मनालीको पतलिकुहलको जंगलमा शव फेला परेको एसपी पाण्डेले जानकारी वलीको शव बिहीबार दाङ ल्याइएको छ। मृतक सबै मजदुरीका लागि भारत गएका थिए।
मृतक तीनै जनालगायत अन्य केहीलाई अमुवाका ४६ वर्षीय जाईफली मियाले मजदुरीका लागि मंसिर १४ गते भारतको कुल्लुमनाली लगेका थिए।
आफन्तले शव बुझ्न मानेनन्
एकै गाउँका तीन युवाको रहस्यमय ढंगले मृत्यु भएपछि पूर्णबहादुर वलीका आफन्तले शव बुझ्न मानेका छैनन्।
आफन्तले शव बुझ्न नमानेपछि वलीको शव राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर शव गृहमा राखिएको छ। मृतकका आफन्तलेहरुले तीन जना युवाहरुलाई षडयन्त्रपूर्वक हत्या गरिएको हुँदा मेट बनेर गएका मियालाई कारबाही माग गरेका छन्। आक्रोसित स्थानीयले मियामाथि कारबाही माग गर्दै रातभर इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा नाराबाजी गर्दै धर्ना दिएका छन्। मियालाई तुलसीपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको छ।
‘आक्रोशित भीडले मियाको ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिँदै रातभर नाराबाजी गरेर गेटमा धर्ना दिए,’ इप्रका प्रमुख प्रेमबहादुर शाहीले भने, ‘प्रहरीले उच्च संयमता अपनाएर रातभर उनीहरूलाई सम्झाई बुझाएर सहमति कायम गर्न सफल भएको छ।’
यसैबीच घटनाबारे सत्यत्थय बुझ्न इप्रका तुलसीपुरबाट एकजना प्रहरी अधिकृतसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडित परिवारका सदस्य शुक्रबार नै अनुसन्धानको लागि भारत जाने सहमति भएको दाङ प्रहरी प्रवक्ताडिएसपी विनोद विक्रम शाहले जानकारी दिए। भारत जान आउन तथा त्यहाँ अनुसन्धानका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च शान्तिनगर गाउँपालिकाकाले बेहोर्ने सहमति भएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले तीन युवाको रहस्यमय मृत्युबारे सत्यतथ्य उजागर गर्न जाने टोलीको सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्ने जानकारी दिए।
टीकाको दिन नेपाली सेनाको निःशुल्क बस सेवा (रुटको सूचीसहित)
Posted on September 26, 2017 Author जलजला अनलाइन
असोज १०, काठमाडौं । १४ असोजमा विजयादशमीका दिन नेपाली सेनाले गैरसैनिक प्रयोजनका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । टीकाका दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन कम सञ्चालन हुने भएकाले सेनाले सर्वसाधारणका लागि बस चलाउने भएको हो । सेनाको जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार उपत्यकाका आठ वटा रुटमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराइन लागेको हो । […]
घाईतेको मृत्युपछि तुलसीपुर सिटी हस्पिटलमा तनाव
साउन ८, दाङ । डाक्टरको लापरवाहीले गर्दा घाइतेको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै तुलसीपुरको तुलसीपुर सिटी हस्पिटल प्रालिमा मृतकका आफन्तले तालावन्दी गरेका छन् । दाङको बबई गाउँपालिका वडा नं. ७ निवासी ३७ बर्षीय केवल बस्नेतको उपचारका क्रममा तुलसीपुर हस्पिटलमा साढे ४ बजेतिर मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक रमेश विष्टले जानकारी दिए […]
सल्यानमा बस दुर्घटना हुँदा ४३ घाइते, एकजनाको अवस्था गम्भीर (नामावलीसहित)
Posted on May 20, 2018 May 20, 2018 Author
जेठ ६, काठमाडौं । सल्यानको सल्ली बजार नजिकै यात्रुबहाक बस दुर्घटना हुँदा ४३ जना घाइते भएका छन् । एक जनाको अवस्था गम्भीर छ । रुकुमको चौरजहारीबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको ना३ख ९८७२ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा सडकबाट करिब सय मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सल्यानले जनाएको छ । सल्यानका डीएसपी भरतबहादुर बिकका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा […]
प्रतिबन्धको प्रस्ताव लैजाने गृहमन्त्री किन विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन चाहन्छन्? यस्तो छ भित्रि रहस्य
प्रतिबन्धित विप्लव समूहको मतियार भएको भन्दै दूधे बालकसहित आमा पक्राउ